Warshadda Hore ee Roto Forward | Soo -saareyaasha Soo -saareyaasha Roto Dibadda ee Shiinaha, Alaab -qeybiyeyaasha
DW taxane hawo -mareenka centrifugal
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo -mareenka: 2.Hawo -mareenka waxaa si toos ah u kaxeeya mashiinka korontada rotor -ka dibedda. Awoodda lagu qiimeeyay matoorka korontada saddex-waji 380V, hal-waji 220V, qiyaasta soo noqnoqoshada 50Hz, dabeecadda nidaamka shaqada ee joogtada ah ee S1, korantada korantada ee daboolida korontada IP44, darajada dahaarka B, habka qaboojinta-hoos waa qaboojinta dabiiciga ah IC0041 . Heerkulka jawiga shaqadu kama sarreeyo 40. Joogga ka sarreeya badda le ...
KT taxane hawo -mareenka centrifugal
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo -mareenka: 2.Ku rakibidda hawo -mareenku wuxuu noqon karaa mid caadi ah iyo laba nooc oo kale, foomka caadiga ah ee la adeegsado sida shaxda ayaa muujinaya ： 3.KT hawo -mareenka taxanaha ah waa nooca cusub ee badeecadda oo loogu talagalay baahida suuqa . Waxay ku saleysan tahay taxanaha hawada ee taxanaha DW. Waxay ku habboon tahay tikniyoolajiyadda mechatronics. Sidoo kale, waa qaab-dhismeed macquul ah, mug yar, buuq yar, cadaadis biyo-biyood sare ah, aag wax-ku-ool ah oo duurjoog ah, nolol adeeg dheer, ...
BDW taxane hawo-mareenka centrifugal qarxa oo aan caddayn
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo -mareenka: 2.Hawo -mareenka waxaa si toos ah u kaxeeya mashiinka korontada rotor -ka dibedda. Awoodda lagu qiimeeyay matoor koronto saddex-waji 380V, hal-waji 220V, lagu qiimeeyay inta jeer ee 50Hz, dabeecadda nidaamka shaqada joogtada ah ee shaqada S1, korantada korantada daboolida korantada IP54, darajada dahaarka F, habka qaboojinta-hoosku waa qaboojinta dabiiciga ah IC0141 , Calaamadda qarxa oo aan caddayn ExdⅡBT4Gb. Heerkulka jawiga shaqada waa -20 ...
DDW taxane hawo -mareenka centrifugal
Dabeecadda badeecadda 1. Sharaxaadda qaabka hawo-mareenka: 2.Hawo-mareenka waxaa kaxeeya mootada korontada ee rotor-ka oo si toos ah loogu qiimeeyo danab koronto saddex-waji 380V, hal-waji 220V, r soo noqnoqoshada 50Hz, dabeecadda nidaamka shaqada ee joogtada ah S1, koronto darajada ilaalinta daboolida ee mootada IP44, darajada dahaarka B, habka hoos udhaca waa qaboojinta dabiiciga ah IC0041. Heerkulka hawsha shaqada oo aan ka badnayn 40 ℃. Heerka ka sarreeya heerka badda ma dhaafo 1 R ...